लघुवित्तको उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण नै हो – रेशम न्यौपाने
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७४, शुक्रबार १५:२२
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
पछिल्लो समयमा लघुवित्त बैंकहरुले कर्जामा लिने गरेको व्याजदर महंगो भएको कुराहरु आएका छन् । कतिपय अखबारहरुले ब्याजदर महंगो भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘नयाँ शोषक’ कै संज्ञा दिएर समाचारहरु लेखेको पनि देखियो । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज किन महंगो हुन्छ ? भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ । बैंकले पर्याप्त धितो लिएर कर्जा लगानी गर्छ तर हामी बिना धितो कर्जा दिन्छौं । अन्य बैंकहरुसँग लघुवित्तलाई तुलना गरेर यसको ब्याज महंगो भयो भन्नु सहि होइन । किनकि हामीले सबैभन्दा पहिले लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य बैंकहरुबीचको कार्यगत भिन्नता बुझ्नु जरुरी हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पुर्याउने वित्तीय सेवा र अन्य बैंकहरुबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय सेवामा निकै भिन्नता छ । हामी गाउँगाउँमा गएर सेवा पुर्याउँछौं । हाम्रो सेवा पाउनका लागि ग्राहक कार्यालयसम्म आउनुपर्दैन । हामी उनीहरुकै घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन्छौं । यसो गर्दा जो श्रम गरेरै आफ्नो गुजारा चलाउँछ, त्यो व्यक्ति आफ्नो श्रम गर्ने समय खर्च गरेर बैंक धाउनु पर्दैन ।
हामी उनीहरुको घरदैलोमै पुगेर सेवा दिन्छौं ।
लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य गाउँघरमा वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गर्नु पनि हो । अनि ती ग्रामीण महिलाहरु जो चुलोचौकामै सीमित हुन्छन्, जसले आफ्ना पारिवारिक आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि आफ्ना श्रीमान्कै भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नै उनीहरुलाई सामाजिक र आर्थिक रुपले सशक्तिकरण गर्नु पनि हो । यसर्थ, लघुवित्तले जसरी वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको लागि काम गर्छ, त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारका अवसरहरु देखाउने काम पनि गर्छ ।
अझ साँच्चिकै भन्नुपर्दा अबको लघुवित्तलाई केवल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने संस्थाको रुपमा मात्र नभई यसबाट प्रवाह गरिने सेवालाई विविधिकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । लघुवित्तको दीगो विकास र सम्बद्र्धनका लागि वित्तीय सेवाको अलवा यसले स्वरोजगारको सवालमा सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने सशक्तिकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास हुनेछ । अब लघुवित्तहरु पनि सेवा प्रवाहमा विविधिकृत हुनुपर्छ ।